Ogaden News Agency (ONA) – Bara-kac Xoogan oo Kajira Magaalada Moyale.
Bara-kac Xoogan oo Kajira Magaalada Moyale.
Wararka naga soo gaadhaya magaalada Moyale ee koonfurta Gobolka Oromia ayaa sheegaya in uu magaalada iyo nawaaxigeeda kasocdo bara-kac aad ubaaxad wayn oo ciidamada nacabka ah ee wayaanuhu ay ugaysteen dadka shacabka ah ee deegaankaas ku dhaqnaa.
Sida xogta aan kuhelayno waxaa wadanka Kenya soo galay in kabadan 15 kun oo qays kuwaas oo magan galiyo waydiistay dowlada Kenya, warka ayaa intaas kudaraya in hay’ada socdaalka ee wadanka Kenya ay dadkan qoxooti ahaan uqaabileen iyagoo dad kale oo jidka kusoo jirana kuraadiyay baabuur ay xuduuda kaga sooqaadaan.
Dadkan shacabka ah ee qoxootiga kusoo galay wadanka Kenya ayaa lasheegayaa in ay ahaayeen kuwii ciidanka wayaanaha maalintii daraato ahayd kula dagaalamay magaalada Moyale, kuwaas oo laga dilay in kabadan 17 qof halka dhaawac aad ubadana loogaystay.
Maalin nimadii daraato ayay ahayd markii dagaalku uu dhex maray dadka shacabka ah ee kudhaqan magaalada xuduuda Kenya iyo Itoobiya dhacda ee Moyale, halkaas oo dagaal khasaare badan gaystay kadib ciidanka wayaanuhu ay kabilaabeen ugaadhsi iyo aar goosi baahsan oo dadka deegaanka loogaystay.
Dhinaca kale ciidanka naflacaariga ah ee wayaanaha ayaa isla magaalada Moyale shalay oo Axad ahayd ku dilay 2 qof oo shacab ah, kuwaas oo latoogtay iyagoo howl maalmeed kooda caadiga ah iska wata, sidoo kale ciidanka gumaysiga ee magaalada Moyale ayaa lasheegayaa in ay dad badan xidh xidheen.
Ma aha markii ugu horaysay oo ciidanka bahalka ah ee wayaanuhu ay bara-kiciyaan dadka shacabka ah, waxaana laxasuusan yahay kumanaankii shacabka ahaa ee wadanka Ogadenia kabarakacay intii kadambaysay sanadkii 2006 dii, oo ahaa sanadkii ay bilaabatay barakicintii ugu xoob badnayd taas oo ilaa iyo hada socota.
Wixii war ah ee arinta Moyale kasoo kordha kala soco Wakaalada Wararka Ogadenia ONA.